Famitahana - Fitiavana zazalahy - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
fitaka Average 4 / 5 avy amin'ny 1
N / A, manana fomba fijery 10.2K
로 금 수저, Sotro volamena mpampiantrano
Adult, tantara an-tsehatra, vadin'ny, Romance, seinen
Na Bonggu dia matihanina raha miresaka vehivavy mahafinaritra - izay mahatonga azy ho mpampiantrano tonga lafatra (ie gigolo).
Taorian'ny alina nijanonany tao amin'ny motel niaraka tamin'ny mpanjifa vehivavy manankarena dia nanatona azy ny olona heveriny fa vehivavy mpanakanto mpanakanto: Seulbi.
Hita fa nanana fifandraisana i Seulbi izay afaka manampy azy handoa ny trosany 3 tapitrisa dolara. Nihaona tamin'ny Ramatoa Hong izy mirahalahy,
izay miasa azy ireo amin'ny famitahana vehivavy manankarena dimy. Saingy tsy voatery hisy ny loza ateraky ny asa: Bonggu sy Seulbi dia
noterena hanao collar shock dia nasiana fitaovana fanarahana. Tokony hamita ny iraka ampanaovina azy ireo izy ireo… na handoa ny vidiny.
71 Jona 30, 2021
70 Jona 30, 2021
69 Jona 30, 2021
68 Jona 30, 2021
67 Jona 30, 2021
66 Jona 30, 2021
65 Jona 30, 2021
64 Jona 30, 2021
63 Jona 30, 2021
62 Jona 30, 2021
61 Jona 30, 2021
60 Jona 30, 2021
59 Jona 30, 2021
58 Jona 30, 2021
57 Jona 30, 2021
56 Jona 30, 2021
55 Jona 30, 2021
54 Jona 30, 2021
53 Jona 30, 2021
52 Jona 30, 2021
51 Jona 30, 2021
50 Jona 30, 2021
49 Jona 30, 2021
48 Jona 30, 2021
46 Jona 30, 2021
45 Jona 30, 2021
44 Jona 30, 2021
42 Jona 30, 2021
41 Jona 30, 2021
40 Jona 30, 2021
39 Jona 30, 2021
38 Jona 30, 2021
37 Jona 30, 2021
36 Jona 30, 2021
35 Jona 30, 2021
34 Jona 30, 2021
33 Jona 30, 2021
32 Jona 30, 2021
31 Jona 30, 2021
30 Jona 30, 2021
29 Jona 30, 2021
28 Jona 30, 2021
27 Jona 30, 2021
26 Jona 30, 2021
25 Jona 30, 2021
24 Jona 30, 2021
23 Jona 30, 2021
22 Jona 30, 2021
21 Jona 30, 2021
19 Jona 30, 2021
16 Jona 30, 2021
15 Jona 30, 2021
14 Jona 30, 2021
13 Jona 30, 2021
11 Jona 30, 2021
10 Jona 30, 2021
09 Jona 30, 2021
05 Jona 30, 2021
04 Jona 30, 2021
03 Jona 30, 2021
02 Jona 30, 2021
01 Jona 30, 2021
Ilay mpamosavy matory
Umineko Tsy Misy Koro Ni Episode X